Kôntinenta - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Kontinenta)
Ny kôntinenta na tanibe dia tany midadasika mitohy hodidinin-dranomasina manontolo na amin' ny ampahany izay lehibe lavitra noho ny nosy sady onenan' ny vahoaka amin' ny firenana maro eto ambonin' ny Tany. Miovaova ny tena famaritana ny hoe kontinenta arakaraka ny taranja iresahana azy ka mahatonga ny isan'ny kontinenta hiovaova. Misy ohatra ny mpanoratra manao an'i Eorôpa sy i Azia ho kontinenta roa, nefa misy ny manambatra azy ka miantso azy hoe Eorazia noho izy ireo tany mitohy tsy misy fahatapahany. Miova eo anelanelan'ny efatra sy fito noho izany ny isan'ny kontinenta.
Ireto avy ireo kontinenta dimy eto ambonin'ny Tany:
Amerika (Amerika Avaratra sy Amerika Atsimo)
Indraindray dia isaina ho kontinenta manokana i Antarktika.
1.1 Jeografian' i Afrika
1.2 Firenena ao Afrika
2.1 Jeografian' i Amerika
2.2 Firenena ao Amerika
2.2.1 Firenena ao Amerika Avaratra
2.2.2 Firenena ao Amerika Afovony
2.2.3 Firenena ao Amerika Atsimo
5.1 Firenena ao Ôseania
I Afrika dia manana velarana mirefy 30 221 532 km2 miaraka amin'ny nosy manodidina azy. Mahatratra hatramin'ny iray lavitrisa ny isan'ny mponina ao aminy tamin'ny taona 2010. I Afrika dia voafaritry ny Ranomasina Mediteranea any avaratra, ny Lakandranon'i Suez sy ny Ranomasina Mena any avaratra atsinanana, ny Ranomasimbe Indiana any atsinanana ary ny Ranomasimbe Atlantika any andrefana. Misy firenena 48 miaraka amin'i Madagasikara, ary 53 miaraka amin'ny tamba-nosy rehetra I Afrika. Mamaky an'i Afrika ny Fehiben-tany sy ny ny zana-pehintany roa.
Jeografian' i AfrikaHanova
Ny velarantany manontolon'i Afrika dia 30 000 000 km2 izay mahatonga azy ho tanibe faharoa lehibe indrindra. 8 000 km ny halaviran'ny Cap des Aiguilles (ao Afrika Atsimo) amin'ny Ras Ben Sakka (ao Tonizia), ary 7 000 km ny halaviran'ny Ras Hafun (ao Somalia) amin'ny nosin'i Cabo Verde. Ny toerana avo indrindra ao Afrika dia ny tampon'ny tendrombohitra Kilimanjaro izay manana haavo 5 895 m. I Aljeria no firenena lehibe indrindra ao Afrika ary i Nijeria no firenena be mponina indrindra.
Maro samihafa ireo toe-tany hita ao Afrika. Ny faritra avaratra sy atsimo dia manana ny toetany mediteraneanina. Toetanim-pehibe ny toe-tanin'i Afrika Afovoany ary toe-tanin'ny tanimaty (tany efitra) no ananan'ireo faritra izay akaikin'ny zana-pehintanin'ny Asorotany ary ny trôpikan'ny Adijady.
Firenena ao AfrikaHanova
Ireto ny firenena ao Afrika, nalahatra araka ny abidy:
Afrika Atsimo - Alzeria - Angôla
Benino - Borkina Fasô - Borondy - Bôtsoana
Ejipta - Eritrea - Esoatiny (Soazilandy taloha) - Etiôpia
Gabôna - Gambia - Ganà - Ginea - Ginea Bisao - Ginea Ekoatôrialy
Kamerona - Kapvera - Kenia - Kômôro - Kôtidivoara
Lezôtô - Liberia - Libia
Madagasikara - Malaoy - Malỳ - Maorisy - Maoritania - Marôka - Môzambika
Namibia - Nizera - Nizeria
Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Repoblikan'i Afrika Afovoany - Repoblikan'i Kôngô - Roanda
Saô Tôme e Prinsipe - Seisely - Senegaly - Siera Leôna - Sodàna - Sodàna Atsimo - Sômalia - Sômalilandy
Tanzania - Tôgô - Tonizia - Tsady
Zambia - Zimbaboe
I Amerika dia kontinenta faritan'ny ranomasimbe Pasifika any andrefany, ny ranomasimbe Atlantika any atsinanany, ny ranomasimbe Arktika any avarany ary ny ranomasimbe Atsimo any atsimony. Ny faritra tena misongadina dia i Amerika Avaratra sy i Amerika Atsimo. izay heverina ho samy kontinenta mahaleo tena avy indraindray. Ny velarantaniny dia 42 tapitrisa km2 ary ny isan'ny mponina dia 930 tapitrisa eo ho eo tamin'ny taona 2009.
Jeografian' i AmerikaHanova
I Amerika Avaratra avy amin'ny farany avaratra hatramin'ny farany atsimo dia mirefy 15 000 km. Raha isaina avokoa ny velarantany manontolon'i Amerika Avaratra Sy ny velarantany manontolon'i Amerika Atsimo dia kontinenta faharoa lehibe indrindra eto an-Tany i Amerika (velarantany manontolo: 42,44 tapitrisa km²). Avy amin'ny lafiny andrefana hatrany amin'ny lafiny atsinanana dia ahitana karazan' endri-paritra telo :
Ny morontsiraka andrefana dia ahitana tendrombohitra avo (mahatakatra hatrany amin'ny 6 959 m ny tendrombohitra Aconcagua): ao Amerika Atsimo no ahitana ny tangorombohitra lava indrindra ivelan-dranomasina (6 000 km ny avy any atsimo mianavaratra).
Ny faritra afovoan'ny kontinenta amerikanina roa indray dia ahitana na tany lemaka (eo amin'ny faritra afovoan'ny Amerika Avaratra), na alabe rehefa manakaiky ny Fehibe (alan'i Amazonia, any Amerika Atsimo). Ny toerana misy an'ireo tany lemaka sy alabe ireo dia tany lemaka iva ikambanan'ny renirano (bassin).
Firenena ao AmerikaHanova
I Azia dia voafaritry ny Ranomasimbe Arktika ao avaratra, ny andilan-dranomasin'i Bering sy ny Ranomasimbe Pasifika ao atsinanana, ny Ranomasimbe Indiana ao atsimo, ary ny Ranomasina Mena sy ny Ranomasina Mediteranea ao atsimo-atsinanana. Ny sisiny manasaraka an'i Azia sy Eorôpa dia nifanarahana fa ny tendrombohitra Oraly (Ural). Manana velarana 32 tapitrisa km2 i Azia ka izy no be velarana indrindra amin'ny kontinenta rehetra. Izy koa no be mponina indrindra. Ahitana firenena miisa 46 ny ao amin'io kontinenta io.
I Eorôpa dia ao amin'ny ila-bolantany avaratra sady manana ny ampahany be amin'ny taniny ao amin'ny ila-bolantany atsinanana, izay voafaritry ny kontinentan'i Azia avy ao atsinanana, ny Ranomasina Mediteranea avy ao atsimo, ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasin'i Norvezy avy ao andrefana, ary ny Ranomasimbe Arktika avy ao avaratra i Eorôpa.
Matetika dia zaraina ho faritra efatra i Eorôpa ka ahitana an'i Eorôpa Avaratra, i Eorôpa Andrefana, i Eorôpa Afovoany, i Eorôpa Atsinanana ary i Eorôpa Atsimo. Misy firenena dimampolo ao Eorôpa, ary i Rosia no ngeza indrindra amin'ireo, ary i Vatikàna no firenena kely indrindra.
I Ôseania dia fitambaran'i Aostralia sy ny nosy anarivony maro manodidina ao amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe Pasifika. Ahitana firenena miisa 14 ny ao Ôseania. Manana velarana 8 523 655 km2 eo ny kontinentan'i Ôseania. Ny 90% n'izay dia Aostralia. Izy no kontinenta kely indrindra eto an-tany.
Firenena ao ÔseaniaHanova
Ahitana firenena miisa 14 ny ao Ôseania. Hita ao i Aostralia, i Zelanda Vaovao, i Papoazia, i Ginea Vaovao, i Tasmania, i Melanezia, i Mikrônezia, i Pôlinezia, i Haoay.
I Antarktika dia ilay kontinenta misy ny tendrontany atsimo. Manana velarantany 14 tapitrisa km2 izy. Ny 98%n'ny velarantaniny dia ranomandry manana hatevina mety mahatratra 1 600 m. Mangatsiaka sy maina ary be rivotra indrindra eto an-tany i Antarktika. Zavamaniry sy biby mahazaka ny hatsiaka sy ny aizaina ary ny hamaina ihany no miaina any.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôntinenta&oldid=1041396"
Dernière modification le 10 Desambra 2021, à 15:49
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2021 amin'ny 15:49 ity pejy ity.